"ဖက်ဒရယ်အပေါ် အခြေခံပြီး အားလုံးဆွေးနွေးပြောဆိုသင့်တယ်၊ ဒီလိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်လာဖို့က အရေးကြီးတယ်၊ မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ဆို့နေဦးမှာပဲ" ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး (ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်း၊ ရေးမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်) » Myanmar Peace Monitor
“ဖက်ဒရယ်အပေါ် အခြေခံပြီး အားလုံးဆွေးနွေးပြောဆိုသင့်တယ်၊ ဒီလိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်လာဖို့က အရေးကြီးတယ်၊ မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ဆို့နေဦးမှာပဲ” ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး (ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်း၊ ရေးမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်)
ရေးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်း ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးနှင့် အင်တာဗျူး
ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်‌‌‌ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ကာ ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေကို လေ့လာဖူးပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့သူဟာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှာလည်း ကျန်းမာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၀ပြည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ရေးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ယခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – လက်ရှိငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါသလဲ?
ဖြေ – သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ ပထမဦးဆုံးကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ Peace Conference ကို ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့တာ ကျနော်တက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအဆက်ပါပဲ NLD အစိုးရသစ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ၂၁ ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးဆိုပြီး နာမည်အသစ်ပေးလို့ ဆက်လက်ကျင်းပတယ် အမည်နာမ မတူသော်လည်း အကောင်အထည်ဖော်မှုကတော့ အတူတူပါပဲ၊ တကယ်ဆိုရင် တစ်နှစ် ၂ ကြိမ်ကျင်းပသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေမယ့်လည်း ဖြစ်မလာပါဘူး၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း အလွန်နည်းပါတယ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ NRPC ကနေ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်လို့ ရှေ့ဆက်အကောင်အထည်ဖော်သင့်တဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်လည်း တက်ရောက်အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတော့ ကျနော်မတက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါ၊ ၂၁ ရာစုပင်လုံမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံး ဝင်မပါနိုင်သေးဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့နေရာမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်လာဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ၊ အားလုံးအပစ်ရပ်နိုင်ဖို့က အဓိကပါ၊ အားလုံးပါဝင်မှု All Inclusive မဖြစ်ဘူးဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ဝက်လောက်သာပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိပြီး တစ်ဝက်လောက်လောက်ကျန်နေတာက အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး၊
မေး – ငြိမ်းချမ်းရေဖော်ဆောင်ရေးမှာ လာမယ့်အစိုးရသစ်အပေါ် ဘယ်လောက်မျှော်လင့်ထားသလဲ?
ဖြေ – လက်ရှိမှာ ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက် အပိုင်း ၃ ပိုင်းရှိပြီ ချုပ်ဆိုထားတာ လာမယ့်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်သွားမလားဆိုတာ စဉ်းစာစရာတွေ ဖြစ်စေတယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အခု NLD အစိုးရဘဲဆိုရင် အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်က သိပ်ပြီးတိုးတက်လာဖို့ လမ်းမမြင်မိဘူး၊ အခုလို NLD အစိုးရရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ အမြင်သဘောထားနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတိုင်းပဲ ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်က လက်ရှိအတိုင်းပါပဲ ဘာမှလည်းအကောင်အထည်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပါးစပ်အပြောပဲ သက်သက် ရှိပါလိမ့်မယ်။
မေး – ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲ။
ဖြေ – NLD အစိုးရတက်လာကတည်းက ကျနော်တို့တွေ့ပြီးပြီလေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မယ် ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ လက်တွေ့မှာ ဘာအဖြေမှမထွက်ပါဘူး၊ ၂၁ ရာစုပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဆိုတာလည်း ဘာမှလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရနိုင်လောက်တဲ့ ရလဒ်မထွက်ပါဘူး NCA လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ EAOs တွေကို မပြောနဲ့ဦး လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပါ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ ဒုက္ခသည်တွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်၊ ၂၁ ရာစုပင်လုံဆိုတာကလည်း အပေါ်ယံဟန်ပြလုပ်ပြသွားတဲ့သဘောပါပဲ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတာ ညီလာခံမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးချိန်မရပါဘူး၊ စာရွက်ပေါ်မှာ လိုချင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကျလာအောင် အတင်းတွန်းပြီးလုပ်တာ၊ အဓိကမကျတဲ့အရာတွေမှာ ငြင်းခုံနေကြရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။
အကယ်၍ လာမယ့်အစိုးရသစ်အခင်းအကျင်းဟာ တိုင်းရင်းသားအစုံပါဝင်နိုင်တဲ့ Coalition Government ညွ့န်ပေါင်းအစိုးရ တက်လာခဲ့ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေက ပိုပြီးမြန်ဆန်လိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ် တိုင်းရင်းသားတွေလည်း အထိုက်အလျာက်ပါလာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ မဖြစ်မနေ ဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်လာမယ် ဒါပေမယ့် အစိုးရအပြောင်းအလဲမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတိုင်းပဲ ဘာမှဖြစ်ထွန်းနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ဖက်မှာလည်း အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြား တစ်ဆို့မှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်၊ တပ်နေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့လာမယ် အကြပ်ကိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ အခက်တွေ့လာဖို့ပဲ ရှိတယ်၊
နောက်တစ်ချက် ပိုပြီးအခက်တွေ့လာစရာရှိတာက လက်ရှိကျနော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ကျနော်တို့က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ဆောက်မယ်လို့ အားလုံးလိုလိုပြောဆိုနေကြတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် တချို့အဖွဲ့တွေမှာ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း Confederation လို့ ပြောဆိုသံထွက်လာတယ်၊ ဒါကြောင့် ဖက်ဒရယ်အပေါ် အခြေခံပြီး အားလုံးဆွေးနွေးပြောဆိုသင့်တယ်၊ ဒီလိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်လာဖို့က အရေးကြီးတယ်၊ မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်ဆို့နေဦးမှာပဲ။
မေး – ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော ဘာပြောချင်တာရှိလဲ။
ဖြေ – ပြီးခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ အစိုးရဘက်က “ပြည်နယ်အခြေခံဥပဒေ” တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ” ဒီစာလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရင် Constitution ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်အတူတူပါပဲ၊ ဒါက အချိန်ဆွဲတဲ့နည်းဗျူဟာ အစီအမံတွေပါပဲ၊ ဖက်ဒရယ်မဖြစ်နိုင်အောင် အချိန်ဆွဲထားချင်တဲ့ အုပ်စုအကြိုက်ပါပဲ အဲဒီစကားရပ်တစ်ခုကိုပဲ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ငြင်းခုံပြောဆိုရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်စေတာပဲ၊ ဖက်ဒရယ်ကို ပါးစပ်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့အုပ်စုရှိနေတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်း “ခွဲမထွက်ရ” စကားလုံးနဲ့ ချိတ်လိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလည်း လွယ်လွယ်နဲ့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး၊ နောက်တော့ ခွဲမထွက်ရစကားလုံးကို မသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး ညီလာခံဆက်လုပ်တာ အခု “ပြည်နယ် အခြေခံဥပဒေ” နဲ့ “ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ” ဆိုပြီး ပြဿနာတစ်ခုလို ဖြစ်လာစေတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဘာသာပြန်ပြန်ပါ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Constitution ပါပဲ။ စကားလုံးတွေလိုက်ရှာပြီး အငြင်းအခုံဖြစ်အောင် အချိန်ဆွဲတဲ့နည်းဗျူဟာတွေ ဖြစ်တယ်။
မေး – ဖြည့်ပြောချင်တာ ရှိရင် ပြောပေးပါ။
ဖြေ – နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်ပြောလိုတာကတော့ ကျနော်တို့ဟာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးချပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို အမြန်ရောက်စေဖို့ အဓိကထားပြီး ကြိုးပမ်းစေချင်ပါတယ်၊ တက်လာမယ့်အစိုးရမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေလည်း ပါဝင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ၂၁ ရာစုပင်လုံက ခရီးမြန်မြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊ နောက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆောင်တဲ့ အပစ်ရပ်စဲရေးဖြစ်လာဖို့ ၂၁ ရာစုပင်လုံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ ပါဝင်လာဖို့ အစိုးရနဲ့တပ်မတော်အပါအဝင် ကျနော်တို့အားလုံး ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာ စေတနာအမှန်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗညားအောင်(MNA) – ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည်။